सफलताका लागि नकरात्मकताको उपयोग | प्रेरक संसार
सफलताका लागि नकरात्मकताको उपयोग
डा. योगी विकाशानन्द नकारात्मक कुरा भनेको आगो जस्तै हुन्छ, सीधै छोएमा हात-खुट्टा जल्छ तर त्यसमाथी खाना बसालेमा पाक्छ । आगोलाई फालेमा खान...
नकारात्मक कुरा भनेको आगो जस्तै हुन्छ, सीधै छोएमा हात-खुट्टा जल्छ तर त्यसमाथी खाना बसालेमा पाक्छ । आगोलाई फालेमा खाना कस्ले पकाउछ ? अतः नकरात्मक कुराको सदुपयोग गर्नुबाटै मान्छे महान् बन्ने हो ।
उदाहरणार्थ, मान्छे जेलमा पर्नु कम सानो समस्या होइन तर ओ हेनरी जेलमा परेपछी मात्र साहित्यिक लेखन तर्फ हात हालेका हुन् । त्यस्तै दोस्तायवस्तीले कालजयी कृति क्राइम एण्ड पनिशमेन्ट जेलमा छदानै लेखेका थिए । एच जी वेल्स दुर्घटनाले विस्तारामा थला परेपछी यसैको सदुपयोग गरी महान् साहित्यकार बन्न सके । अमेरिकी नागरिक मिचेलको राम्रो अनुहार दुर्घटनाले कुरुप बन्छ तर उनले त्यही अनुहारलाई चुनावी नारा बनाइ संसद बन्न सफल भइन् । त्यस्तै महाकवि दाँते वेट्रिसेको असफल प्रेमले उब्जाएको पिडाबाटै साहित्यकार बन्न सकेका हुन् ।
अतः नकारात्मक कुराको सदपयोग गर्न सके यसले तपाईको सफलतासम्म डोर्याउन सक्दछ ।
- डा. योगी विकाशानन्द
प्रेरक संसार: सफलताका लागि नकरात्मकताको उपयोग